မော်စီ နှင့် သူ၏အိပ်မက်များ: 2007
ချစ်သောဘလော့ဂါမောင်နှမများခင်ဗျား ကျနော် မနက်ဖြန်အစောကြီး ခရီးရက်ရှည် ထွက်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော် ပိုစ့်တင်ခြင်း ဘလော့လည်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်မည်မဟုတ်တော့ပါ။ ကျနော်အခုသွားမှာ နည်းနည်းတော့ကြာမယ်ထင်တယ်။ စိတ်ပြေလက်ပျောက် ခရီးဆိုပါတော့။ ကျနော်မရှိတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ ကျနော်ရဲ့ အိမ်(ဘလော့)ကို လာရောက်စောင့်ရှောက်ပေးကြပါဗျာ။ အချိန်တွေကြာလို့ဆိုပြီး ကျနော့်ကို
မေ့မသွားကြနဲ့နော်။ ကျနော် ပြန်ရောက် ရောက်ခြင်း ကျနော်ချစ်တဲ့ ဘလော့ဂါမောင်နှမ တွေကို အကြောင်းကြားပါ့မယ်။ ကျနော်ချစ်တဲ့ဘလော့ဂါမောင်နှမများ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ
ကျန်းမာချမ်းသာကြပြီး လိုအင်ဆန္ဒများလည်း ပြည့်စုံပါစေဗျာ . . .
. . . . . . ချစ်တဲ့ . . . .
မော်စီ . . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 7:02 AM 1 ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ဒီဇင်ဘာလ 23 ရက်နေ့ ကျနော့်တူမလေး အသက်တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မှ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်း စိတ်၏ချမ်းသာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံပါ စေလို့ ကျနော်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ကျနော့် တူမလေးရဲ့ဓါတ်ပုံတွေတင်ထား ပါတယ်။ အဲ သူကျွေးတဲ့ ကိတ်မဲကြီးကိုလည်းစားသွားကြပါအုံးနော် . . .
ဘယ်လိုလဲ တူမလေးက ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မဟုတ်လား။ အဲ . . . အမေပြောတော့ ကျနော် ငယ်ငယ်တုန်းက ဒီ့ထက်ပိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ ပြောတာပဲ ဟုတ်မယ် ထင်တယ်နော် . . .
ကျနော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ချို့တွေဟာ သက်သတ်လွတ်စားကြတာရှိပါတယ်။ သက်သတ်လွတ်နဲ့ ပက်သက်လို့ကျနော် ဗဟုသုတအနေနဲ့ သိထားတာလေးကို မျှဝေ ချင်လို့ပါ။ ဒါတွေကို တစ်ချို့ကလည်း သိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ကျနော်တို့ သက်သတ်လွတ် ကိုစားကြတာတွေဟာ ကုသိုလ်ရတယ်လို့ အယူမှားခဲ့ကြပါတယ်။ (ကျနော် အားလုံးကို ဆိုလိုခြင်း မဟုတ်ပါ)
တစ်ချို့တွေကမွေးနေ့မှာ သက်သတ်လွတ်စားကြပါတယ် တစ်ချို့တွေက၀ါတွင်းသုံးလ မှာစားကြပါတယ် အဲတစ်ချို့တွေဆိုအမြဲတမ်း စားကြပါတယ်။ ကျနော်တို့ သက်သတ် လွတ်စားတဲ့အခါမှာ ကုသိုလ်ရတယ်လို့ထင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျနော်လည်းစာခဲ့ဖူးပြီးကုသိုလ်
ရတယ်လို့ထင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျနော် အရှင်ဆန္ဒာဓိကရေးသားတဲ့ သက်သတ်လွတ်နှင့် ကုသိုလ်စိတ် ဆောင်းပါးကိုဖတ်ပြီးမှ အကြောင်းမှန်တွေကို သိခဲ့ရတာပါ။
သက်သတ်လွတ်စားရုံမျှဖြင့် ကုသိုလ်မရနိုင်သလို အသားငါးတွေစားခြင်းကြောင့်လည်း
ကြောင့် ကုသိုလ်စိတ်၊ အကုသိုလ်စိတ် ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုထားပါတယ်။
သက်သတ်လွတ်စားသုံးသူတစ်ယောက်နဲ့ အစုံစားသုံးသူတို့နှစ်ယောက် အလှူဒါနပြု ကြရာတွင် သက်သတ်လွတ်စားသုံးနေသူက ကုသိုလ်ပိုမရနိုင်ပါဘူး။ အဓိက ကတော့ ကျနော်တို့ ပြုလိုက်တဲ့အလှူဒါနအပေါ်ထားတဲ့စိတ်ထားမှာ မူတည်နေပါတယ်။ တစ်ချို့ ကြတော့လည်း ကျန်းမာရေးကြောင့် သက်သတ်လွတ်စားကြတာတွေရှိပါတယ်။
ကျနော်တွေ့ဖူးတဲ့ အနောက်တိုင်းသား(နိုင်ငံခြားသား) အများစုဟာ သက်သတ်လွတ် စားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကကျန်းမာရေးအတွက် စားကြတာပါ။ ကျနော်ဆိုလိုချင်တာက ကျနော်တို့ အလှူဒါနကောင်းမှုကုသိုလ် ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ သက်သတ်လွတ်စားခြင်း မစားခြင်းနဲ့မသက်ဆိုင်ကြောင်းပါ။ သက်သတ်လွတ်စားလို့ ကုသိုလ်ပိုမရနိုင်ပါဘူး။ တစ်ကယ်တော့ သက်သတ်လွတ်စားတဲ့အလုပ်ဟာ ဘာသာ ရေးအလုပ် မဟုတ်ဘူးလို့ ဆောင်းပါးမှာဆိုထားပါတယ်။
ကျနော်တို့ အသားတွေထဲမှာ မစားသင့်တဲ့ အသားဆယ်မျိုးရှိတယ်လို့ ဆောင်းပါးမှာ
ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လူ၊ ခွေး၊ မြင်း၊ ဆင်၊ ကျား၊ ကျားသစ်၊ ခြင်္သေ့၊ ၀ံ၊ အောင်း၊ မြွေ တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ သက်သတ်လွတ်စားသည်ဖြစ်စေ
မစားသည်ဖြစ်စေ အဓိက ကျနော်တို့ ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်အပေါ်ထားတဲ့
စိတ်ထားကသာ အရေးကြီးပါတယ်။ ကျနော်ချစ်တဲ့ ဘလော့ဂါမောင်နှမများအားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျန်းမားချမ်းသာပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 7:55 PM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
တစ်ကယ်တော့ လောကကြီးက သူ့ဟာသူပုံမှန်ချီတက်လျက်ပါ။ ကျနော်လည်း ဘ၀
ကိုပုံမှန်လေးချီတက်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မျှော်လင့်သလိုတော့အမြဲတမ်း ဘယ်ဖြစ် လာနိုင်ပါ့မလဲနော်။ ကျနော် အရင်တစ်ခါကရေးခဲ့ဖူးသလို သုခဆိုတာဒုက္ခရှိမှ တန်ဖိုး
ကျနော့်ဘ၀မှာ အခုလိုစိတ်ဓါတ်ကျတာ ပထမဦဆုံးကြုံရခြင်းပါ။ တော်တော်လေး အခံရခက်တယ်ဗျာ။ အရသာက ခါးသီးလွန်းလှပါတယ်။ရှေ့ဆက်ရမယ့် ကျနော့်ဘ၀ မှာအခုလိုအခါးသီးတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ မကြုံတွေ့ပါရစေနဲ့ဆုတောင်းမိပါတယ်။ ကျနော် ဒီလိုစိတ်သောကများတဲ့ ဒုက္ခကနေလွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးပမ်းနေတုန်းပါ။
ကျနော် ပူဆွေးပြီးစိတ်သောကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ အဖက်ဖက်က၀ိုင်းဝန်းအားပေး တဲ့ ကျနော့်ရဲ့ မိသားစုနှင့်ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေကို အရမ်းကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။ တစ်ကယ်တော့ ကျနော်ဘလော့ကို စတင်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းက ဘလော့ကြောင့် ဒီလောက်ပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်လို့ တစ်ခါမှကြိုမတွေးခဲ့မိပါဘူးဗျာ။ ဒီဘလော့လေးကြောင့်
ကျနော် ဘလော့လောကကိုရောက်လာတာ (၅)လကျော်လောက်ရှိပါပြီး။ ဒီအချိန် အတောအတွင်း ကျနော်သိတဲ့ ဗဟုသုတတွေကို မျှဝေခွင့်ရခဲ့သလို ပြန်ရလိုက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေလည်းအများကြီးပါ။ တစ်ကယ်တော့ ကျနော်ပေးလိုက်တာက နည်းနည်းလေးပါ။ ဘလော့တွေကြောင့် ကျနော်မသိသေးတဲ့ သိသင့်သိထိုက်တာကို
ဘလော့ဆိုတာ လေဟာနယ်ထဲက မိသားစုကမ္ကာလေးတစ်ခုလိုပါပဲဗျာနော်။ တစ်ယောက်က နေလို့မကောင်း(စိတ်၊ခန္ဓာ) ရင် သတင်းသွားတာတို့၊ အားပေးစကား သွားပြောတာတို့ သာတွေဟာတစ်ကယ့် နွေးထွေးတဲ့မေတ္တာတွေပါ။သိထားကြတဲ့ ဗဟုသုတတွေကို မျှဝေတာ တစ်ကယ်ကောင်းပါတယ်။
အမှန်တော့ ကျနော်တို့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ ဘလော့မောင်နှမတွေဟာ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဖူးကြတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ငယ်ငယ်ကတည်းက ခင်ခဲ့တဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းတွေလည်း မဟုတ်ကြပါဘူး။ ကြီးမှ လေထဲမှာတွေ့ကြတဲ့ ကြီးသူငယ်ချင်းတွေ ကြီးမောင်နှမတွေ ထင်တယ်နော်။
အသက်အရွယ်အားဖြင့်လည်း အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ အတွေ့အကြုံတွေလည်းအမျိုးမျိုး ရှိကြမှာပါ။ ဒီလိုကျနော်တို့ရဲ့ အတွေးတွေ၊ အမြင်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရေးသားနေကြတာတွေဟာ တစ်ကယ်ကောင်းတဲ့ အကျိုးရလဒ်တွေပါဗျာ။
ကျနော်တို့ သိချင်နေတဲ့ ခေတ်မီတဲ့ နည်းပညာတွေ အထွေထွေဗဟုသုတတွေကို ဘလော့ကနေတစ်ဆင့်ရရှိပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် တစ်ကယ့်မောင်နှမစိတ်နဲ့ ရင်းရင်နှီးနှီးဆက်ဆံနေကြရတဲ့ ဘလော့လောကကို ကျနော်အသက်ရှင်နေသမျှကာလ ပတ်လုံး ဘယ်တော့မှမေ့နိုင်မယ်မထင်ပါဘူးဗျာ . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 6:12 AM 1 ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကျနော် အင်တာနက်နှစ်ရက်လောက် မတက်ဖြစ်လိုက်ဘူး။ ဖြစ်ပုံကို ပြောကိုမပြော
ချင်ဘူး (ပြောချင်လွန်းလို့)။ ကျနော်ရဲ့ တစ်ဦးတည်း တူမလေးပေါ့။ ဆော့တာလည်း
လွန်ရော ကလေး လေးလို့မပြောရဘူး။ လက်ကလည်း မြန်သေးတယ်။ လူကြီးတွေ
တောင် သူ့ကိုမမီဘူးဖြစ်နေတယ်။ အဲ ကျနော့် တူမလေး ဆော့တာနဲ့ ကျနော် အင်တာနက် မတက်ဖြစ်တာ ဘာဆိုင်လည်းလို့ မေးစရာရှိမှာပါ။
ကဲ စပြီး . . . အိမ်ပေါ်ထပ်မှာ တစ်အိမ်သားလုံး TV ထိုင်ကြည့်နေကြတယ်။ ကျနော်က အိပ်ပြီးကြည့်နေတယ်ပေါ့။ နေ့တိုင်းလိုလို တူမလေးက ဘုရားစဉ်နားမှာ
ဟိုဟာကိုင် ဒီဟာကလိနဲ့ ဆော့နေကြလေ။ ဘယ်သူမှလည်း သတိမထားကြဘူးပေါ့
အဲဒီလိုနဲ့ တူမလေးက ရေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ ဘုရားသောက်တော်ရေအိုးကို ဆွဲချ
လိုက်တာ တစ်အိမ်လုံးကို ရေလျှံသွားတာပဲ။
အဲဒါနဲ့ ကမန်းကတန်း ရေတွေသုတ်ကြပေါ့။ ကံဆိုးတာက ရေဖိတ်ကျတဲ့နေရာက အောက်ထပ်မှာ ကွန်ပြူတာထားတဲ့ နေရာတည့်တည့်ပဲ။ အပေါ်ထပ်က ရေယိုပြီး ကွန်ပြူတာတွေ အားလုံးနီးပါး ရေတွေ စိုကုန်တာပေါ့။ အင်တာနက် Box လည်း ရေစိုကုန်တယ်လေ။ တော်သေးလို့ ကျနော် Laptop လေး ရေမစိုသွားတာ။ အဲဒါနဲ့ ရေစိုသွားတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို နေလှမ်းလိုက် သုတ်လိုက်နဲ့ အလုပ်ကိုရှုပ်နေတာပေါ့။
ရေအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ အိုး(သတ္တုအိုး) ကိုသူမို့လို့ဆွဲချနိုင်တာ။ သူအားကြီးကြောင်း
တစ်အိမ်လုံးကို ပြလိုက်တယ်ထင်ပါ့။ ကျနော့်တူမလေးက အသက်ဘယ်လောက်ရှိ ပြီးလည်းလို့ထင်လဲ။ ဒီလာမည့် ဒီဇင်ဘာ 23 ရက်နေ့မှ တစ်နှစ်ပြည့်မှာပါ။ သူ့မွေနေ့ကျမှ သူ့ပုံတွေကို တင်ပေးအုံးမယ်။ ကျနော်တူမလေးက ချစ်စရာလေးဗျ ကျနော်နဲ့ တူလို့ထင်တယ် . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 6:14 PM2ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
(ဒေ၀ီ: ကိုမော်စီ.... လာလည်သွားပါတယ်။ စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်တယ်နော်... လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်ကပဲ ဆွေးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်က နောက်ဆုံးတော့ ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတာပဲနော်။ အားလုံးဟာ သူ့ဟာသူပြီးဆုံးသွားမယ် ဆိုတဲ့စကားက ကိုမော်စီအတွက်မှန်သွားပြီးနော်)
ဒါက ဒေ၀ီ ကျနော့် စီဗုံးမှာ လာအော်သွားတာပါ။ ဒေ၀ီကို ကျနော်ကမသိပါဘူး။ ဒီနာမည်နဲ့ ကျနော့်ဆီကို တစ်ခါမှ မလာဖူးဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော့်ရဲ့
ဘလော့ဂါမောင်နှမတစ်ယောက်လို့ သဘောထားပါတယ်။ ကျနော်ဆီလာလည်ပြီး
စီဗုံးမှာ ခြေရာချန်ခဲ့လို့ ဒေ၀ီကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေ၀ီရေးပေးခဲ့တာနဲ့ပက်သက်ပြီး ကျနော့်အတွေးမှာဖြစ်ပေါ်တာတွေကို တင်ပြချင်လို့
ဒီပိုစ့်ကိုရေးသားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်က လွန်ခဲ့တဲ့ရက် အနည်းငယ်ကဆွေးနေ
တဲ့လူတစ်ယောက်ဆိုတာ မှန်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမှလည်းငြင်းလို့မရပါဘူး။ ပုံမှန်ဆိုတဲ့
စကားလုံးက ပြောသလောက်မလွယ်ကူပါဘူး။ ကျနော်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီး ဆိုတာ
ကျနော် အပြောင်းအလဲမြန်တဲ့လူတစ်ယောက် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ အပြောင်းအလဲ ဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေ လိုအပ်ရင် ပြုလုပ်ပေးရပါတယ်။ လူတိုင်းကတော့ ဘ၀ကို ပုံမှန်ချီတက်ချင်ကြပါတယ်။ ကျနော်လည်း လူထဲကလူတစ်ယောက်ပါပဲ။ အပြောင်း
အလဲကို ကျနော်လည်းမကြိုက်ပါဘူး။ အခုအဲဒီ ကျနော်မကြိုက်တဲ့ အပြောင်းအလဲ
ကို ကျနော်ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်နေရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေ ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကို ပြောင်းလဲတာ လုပ်သင့်တယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ပူဆွေးသောကများနေတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို ဘယ်သူကကောင်းတဲ့ အခြေအနေလို့ဆိုမလဲ။ လူတိုင်း ကတော့ ပျော်ပျော်နေချင်ကြပါတယ်။ ကျနော်လည်း ပျော်ပျော်နေချင်ပါတယ်။
ကျနော် ပူဆွေးသောကရောက်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ပက်သက်ပြီး ကျနော်အများကြီး ပေးဆပ်ခဲ့
ပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့ ပေးဆပ်မှုနဲ့ ပြန်ရလိုက်တာတော့ လုံးဝမတန်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ကျေနပ်ပါတယ် တစ်ကယ့်ကို ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ ပေးဆပ်ခဲ့တာပါ။ အဲဒီ ပေးဆပ်မှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျနော်ဘယ်တော့မှ နောင်တမရပါဘူး။ ကျနော့်ကြောင့် လူတစ်ယောက် ပျော်ရွှင်သွားရင် ကျနော်ကျေနပ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့နောက်မှာ ကျနော်တို့ ဖြစ်ချင်တာတွေကို ကျနော်တို့ ပြောကြတာပါ။ အဲဒီနောက်ဆုံးဆိုတဲ့ အချိန်ကိုရောက်ဖို့ ကျနော်တို့ အများကြီး ပေးဆပ်သင့်တာပေးဆပ် ရယူသင့်တာရယူ ရအုံးမှာပါ။ အားလုံးဟာ သူ့ဟာသူ ပြီးဆုံးသွားမယ် ဆိုတာနောက်ဆုံးမှ ဖြစ်လာမှာပါ။ နောက်ဆုံးဆိုတဲ့ အချိန်ကိုရောက်ဖို့ ကြန့်ကြာတတ်ပါတယ်။
(ကျနော့်ရဲ့ ပိုစ့်ကို လာရောက်ဖတ်ပေးကြတဲ့ ဘလော့ဂါမောင်နှမများကို ကျေးဇူး တင်ပါတယ်။ ကျနော့်ရဲ့အမြင် ကျနော်ရဲ့အတွေးတွေကို တင်ပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝေဖန်စရာများရှိက ဝေဖန်ပေးကြပါရန် . . .)
ရေးသားသူ မော်စီ at 7:14 PM2ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
လူတွေမှာ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ စိတ်ပါပဲ။ ဤစိတ်ဆိုတာကြီးကို ထိန်းလို့ရခဲ့ရင်
တော့ ပြီးပြီ ဘာမှမလိုတော့ဘူး။ လူတွေကို ပျော်အောင်လုပ်နေတာလည်း ဒီစိတ်ပဲ
၀မ်းနည်းအောင် လုပ်နေတာလည်း ဒီစိတ်ပါပဲ။
ကျနော်တို့ ဘုရားရှင်ကလည်း ဒီစိတ်ကိုထိန်းဖို့ ဟောကြားခဲ့တာပါ။ စိတ်ဆိုတဲ့ဟာ
က မကောင်းတဲ့နေရာမှာ ပိုပြီးတော့ပျော်မွေ့တတ်ပါတယ်။ ဥပမာ ကျနော်တို့ စာကျက်နေတဲ့အချိန် အိပ်ငိုက်တာ မကောင်းမှန်းလူတိုင်းသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ
မကောင်းတဲ့ အိပ်ငိုက်တာကိုပဲ ကျနော်တို့စိတ်ကလိုချင်တာလေ။ ဒါကိုလူတိုင်းလိုလို
ကျနော်တို့ အိပ်ငိုက်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကနေ စာကျက်ချင်လာအောင် လုပ်ယူရတာလဲ
မလွယ်ပါဘူးနော်။ အိပါငိုက်ပြေအောင် မျက်နှာသစ်ရတာနဲ့ အချဉ်လေးစားရတာနဲ့
အမျိုးမျိုးလုပ်ယူရတယ်။ ဒါတောင် သူကကြာကြာခံတာမဟုတ်ဘူး။ ကျနော်တို့ရဲ့ စိတ်ကို အလိုလိုက်ရင်တော့ မကောင်းတာဖြစ်မှာပဲလေ။
ကျနော်တို့ လူ့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကို ဤစိတ်တစ်ခုက ထိန်းချုပ်ထားတာပါ။ ကြိုက်တာ၊
မကြိုက်တာ၊ ချစ်တာ၊ မုန်းတာ၊ လိုချင်တာ၊ မလိုချင်တာ အို . . . အများကြီးပဲ အဲဒီ
စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ ဖြစ်နေတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုဘဲပြောပြော အဲဒီစိတ်ကို ထိန်း
နိုင်ဖို့ အခက်သားဗျ။ ကျနော်တာ စိတ်အကြောင်းလေး ရေးနေတာ ကျနော်လည်း ကျနော့်စိတ်ကို အခုထိ ထိန်းလို့မရပါဘူး။
တစ်ကယ်လည်း ဘယ်သူမှလည်း စိတ်ကိုမထိန်းနိုင်ကြပါဘူး။ အနည်းအကျဉ်းမျှသာ
ထိန်းနိုင်ကြတာပါ။ တစ်ကယ်ထိန်းနိုင်တဲ့လူလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါကလည်း တစ်ကယ်ရှားပါးပါတယ်။ ကျနော်လည်း ကျနေတဲ့စိတ်ဓါတ်တွေကိုပြန်လည်းမြှင့်တင်
ဖို့ တရားစာအုပ်တွေဖတ်နေမိတယ်။ စိတ်ဒုက္ခရောက်မှ တရားစာအုပ်တွေ လိုက်ရှာ
ဖတ်ရတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ ရှက်မိသားဗျ။ ဒါပေမယ့် မတတ်နိုင်ဘူးလေ ကျနော့်
မှာ ပြေစရာဆိုလို့ သာတွေပဲရှိတာလေ။
သက်သာရာရခဲ့မိပါတယ်။ စိတ်ကနဂိုတိုင်းပြန်ကောင်းသွားတဲ့ အထိတိုင်မဟုတ်
တောင်မှ စိတ်သက်သာရာရတာကိုပဲ ၀မ်းမြောက်မိပါတယ်။ တစ်နေ့တစ်ချိန်မှာတော့
ပြန်လည်ကောင်းမွန်သွားမှာပါ။ အခုက ပူပူနွေးနွေးအချိန်ဆိုတော့ ဒီလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့လေ။အခုကျနော် သတ္တ၀ါအားလုံးကို မေတ္တာပွားနိုင်အောင် ကြိုးစားနေ ပါတယ်။ ကျနော့်အပေါ် ကောင်းခဲ့တဲ့လူတွေရော မကောင်းခဲ့တဲ့လူတွေပါ မေတ္တာ ပွားနိုင်အောင် ကြိုးစားနေမှာပါ။
တစ်ကယ်တော့ လူရယ်လို့ ဖြစ်လာပြီးဆိုကတည်းက ဒုက္ခအတိနဲ့ပါ။ ဒါကိုခံနိုင်လည် ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒုက္ခကနေ သုခကိုပြောင်းနိုင်ဖို့အတွက် စိတ်တစ်ခုကသာတတ် နိုင်တာပါ။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ဘလော့ဂါမောင်နှမများအပါအ၀င် လူသားအားလုံး ကိုယ့်စိတ်ကို ကောင်းမွန်စွာထိန်းနိုင်ပြီး ဘ၀ခရီးကို သာယာဖြောင့်ဖြူးစွာလျှောက် လှမ်းနိုင်ကြပါစေ . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 6:49 PM2ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
တစ်ကယ်ဗျာ လောကကြီးမှာရှိတဲ့ လူတွေရဲ့စိတ်က တယ်လည်းခန့်မှန်းရခက်တယ်နော်။ ကျနော်လူ တွေ လို့ သုံးလိုက်တာဟာ လူတွေအားလုံးကို မဆိုလိုပါဘူး။ လောကမှာ ကောင်းတဲ့လူလည်းအများကြီး ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်က မကောင်းတဲ့လူနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရတာပါ။ ကျနော်က ကျနော့်အပေါ်ကောင်းမယ်လို့ ယုံကြည်ထားတဲ့လူတွေက ကျနော်ကို အရူးလုပ်သွား ကြတယ်။ ကျနော် အရူးအလုပ်ခံလိုက်ရတယ်။ အစကတော့ ကျနော် သဘောရိုးနဲ့ ကျနော်ကို စွန့်ခွါသွားတယ် ထင်တာပါ။ သစ္စာဖောက်သွားတာအခုမှ ကျနော်သိ လိုက်ရတယ်။ ဘယ်ထင်မလဲဗျာ ကျနော်အပေါ်ကောင်းခဲ့တာတွေရှိတာကိုး။ ကျနော်လည်း ယုံကြည်မိတာပေါ့။
ကျနော် အကောင်းဆုံး ပေးဆပ်ခဲ့ပေမယ့် ကျနော် ဘာအကျိုးခံစားခွင့်မှ မရရှိလိုက်ရဘူး။ ပေးဆပ်တုန်း ကလည်း ဘာအကျိုးကိုမှ မမျှော်ကိုးခဲ့ပါဘူး။ ကျနော့်ဘ၀မှာ ဒီလိုမျိုးကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးတော့အတွေ့အကြုံလည်းရ ဘ၀သင်ခန်းစာလည်း ရခဲ့ပါတယ်။ နောင်ဆို ဆင်ခြင်ရတာပေါ့။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း လွယ်လွယ်နဲ့ ယုံကြည်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ကျနော်ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ ကောင်းကျိုးတွေအတွက် တစ်နေ့မှာ ကျနော်ပြန်ခံစားရမှာပါ ဒါမှမဟုတ် ကျနော်ရဲ့ အရင်အတိတ်က အကုသိုလ်ဝဋ်ကျွေးတွေ ဤမျှနဲ့ ပြေပျောက်သွားမှာပါ။ နောင်ဒီလို အဖြစ်မျိုးဘယ်တော့မှ မကြုံပါရစေနဲ့လို့ ကျနော်ဆုတောင်းပါတယ်။ ကျနော် အောက်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးတွေကိုလည်း မမျှော်လင့်တော့ပါဘူး။
ကျနော် စိတ်မညစ်တော့ပါဘူး။ ဘာပဲပြောပြော ကျနော်ကံကောင်းသွားတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုရင် ကျနော်က ဘယ်သူကိုမဆို စေတနာနဲ့ကူညီတတ်တဲ့ စိတ်ထားတွေကြောင့် ဓမ္မာဒေ၀ နတ်ကောင်း နတ်မြတ် တွေက ဆောင်မလို့ထင်ပါရဲ့ ကျနော်ဒီလို လိမ်လည်လှည့်ဖျားပြီး သစ္စာမရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ တစ်သက်လုံး လက်မတွဲမိတာပါ။ ကျနော်အရင်တိုင်းပဲ ပျော်ပျော်နေဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေ ပေးပို့တဲ့မေတ္တာတွေကြောင့် အခု ကျနော်ဘ၀ ပုံမှန်ချီတက်လျက်ပါ . . .
(မှတ်ချက်။ ။ ကျနော်မောပန်းခြင်း ဆိုတဲ့ပိုစ့်ကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုရင် လုံးဝသက် ဆိုင်မှုမရှိတော့လို့ပါ။ ကျနော်ကို စိတ်ဓါတ်မကျအောင် အားပေးကြတဲ့ ဘလော့ဂါမောင်နှမတွေကို အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော် အရင်ကလို ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ မော်စီပြန်ဖြစ်သွားပါပြီး။ )
ရေးသားသူ မော်စီ at 8:20 PM3ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
လူတိုင်းမှာ မျှော်လင့်ချက်တွေကိုယ်စီရှိနေကြတာ ဧကန်ပဲလေ။ မျှော်လင့်ချက်တွေ တစ်ခုမကလည်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ကျနော် မနက်ဖြန်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ မျှော်လင့် ချက်လေးတစ်ခုနဲ့ ရှင်သန်နေလျက်ပါ။ ကျနော်ရဲ့ အရမ်းကိုအရေးကြီးတဲ့ မျှော်လင့် ချက်တွေထဲက တစ်ခုဆိုပါတော့။ ကိုယ့်ဘ၀အတွက် အရမ်း အရေးမကြီးတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးတွေရှိနေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ မျှော်လင့်ချက်တွေက
လူ့ဘ၀ တစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလည်းပစ်နိုင်တယ်လေ။ အကောင်းရော အဆိုးရောပေါ့။
မျှော်လင့်သလိုဖြစ်လာရင်တော့ ပျော်ရွှင်မှုတွေကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး မျှော်လင့်သလိုဖြစ် မလာတဲ့အခါ ၀မ်းနည်းပူဆွေးမှုတွေကို ရရှိကြရမှာပါ။ ဘယ်လောက်အထိ ပျော်ရွှင်မယ် ဘယ်လောက်အထိဝမ်းနည်း မယ်ဆိုတာ မျှော်လင့်ချက်အပေါ်ထားရှိတဲ့ စိတ်ထားမှာ မူတည်နေပါတယ်။
လောကကြီးမှာ ရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံး မျှော်လင့်ချက်တွေ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုမက ရှိနေအုံးမှာပါ။ မျှော်လင့် သလိုဖြစ်လာတဲ့အခါရှိသလို ဖြစ်မလာတဲ့အခါလည်းရှိနေမယ်မလွဲပဲလေ။ အဓိကကတော့ ကျနော်တို့ ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ပဲ အရေးကြီးတယ်။ အများအားဖြင့် ၀မ်းနည်းမှုဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ ကြိုးစားကြသလို ပျော်ရွင်ခြင်းဒဏ်တွေကိုလည်း ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကျနော်ချစ်တဲ့ ဘလော့ဂါ မောင်နှမများအားလုံး မျှော်လင့်သလို ဖြစ်လာနိုင်ပြီး မျှော်လင့်ချက်တွေရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်တွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်ကြပါစေ . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 12:02 PM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်က ကျနော်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ကဗျာနှစ်ပုဒ်ကို ကျနော်ပြန်လည်
ရုတ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်မပေးနိုင်တဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ကြဖို့တောင်းပန်ချင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ မော်စီ at 11:35 AM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
တစ်ကယ်ပါ ကျနော်လည်း ပိုစ့်အသစ်တင်ချင်ပါတယ်။ ဘာအကြောင်းရေးရင်ကောင်းမလဲပေါ့။ ဘာမှစဉ်းစား လို့မရဘူး ခေါင်းထဲမှာရေးစရာ ဘာအကြောင်းမှ ကောင်းကောင်းထွက်မလာဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ အင်တာနက်မှာ သဝေထိုးရင်း နည်းနည်းထူးတယ်လို့ ထင်တဲ့ပုံတွေကို တင်လိုက်ပါတယ်။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ကျနော် ပိုစ့်တင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါ့မယ်။ ရှု့ စားကြပါဗျာ . . .
ယောင်လို့တောင်ဒီအင်္ကျီမျိုး ၀ယ်မ၀တ်ပါနဲ့ဗျာ
ရေးသားသူ မော်စီ at 3:33 AM 1 ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကျနော်မနေ့ညက ၇း၁၀ လောက်မှာအိမ်ကိုရောက်ပါတယ်။ ရောက်ရောက်ခြင်း ပြန်ရောက်ကြောင်း သတင်းပို့ ချင်ပေမယ့် ကားကိုတစ်နေ့လုံးစီးလာတော့ ခန္ဓာကိုယ်က ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တော့လို့ပါ။ ခရီးပန်းလာ တယ်ထင်ပါ့ နေလို့သိပ်မကောင်းသလိုပဲ။ ကျနော်နည်းပညာ သင်တန်းလေး သွားတက်တာပါ။ ဘာတွေရခဲ့လည်းဆိုတော့ ကျနော်ပြန်စဉ်းစားရအုံးမယ် ပြီးတော့ အဲဒီပညာတွေကို အသုံးချနိုင်ဖို့ တော်တော်လေး အချိန်ယူပြီး လေ့လာရအုံးမှာပါ။ ကျနော်ရခဲ့တဲ့ပညာတွေကို အလျင်းသင့်သလို တင်ပြ သွားပါမယ်။ အဓိကကတော့ ကျနော်ပြန်ရောက်ကြောင်းသတင်းပို့တာ ပြီးတော့ မုန့်ကျွေးချင်တာရယ်ပါ။ မုန့်စား သွားကြနော်။
အမှန်မှာမုန့်က လေးမျိုးလောက်ဝယ်လာတာ ကျနော်တို့အိမ်က မြင်မခင် ချမခင် အဖွဲ့ဝင်တွေလေ ဒါလေးပဲ စားပြီး ကျေနပ်ကြပါနော် နောက်တော့မှ . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 2:36 AM4ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကျနော် မနက်ဖြန်အစောကြီး ခရီးသွားရပါမယ်။ အခုလည်း ခရီးအတွက်ပြင်ဆင်ရင်း
ခရီးသွားရမယ့်အကြောင်းရေးနေတာလေ။ လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ အားလုံးနီးပါး ထည့်ထားလို့ပြီးပြီးထင်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ကျော်ကျော်လောက်ကြာမယ်။ အဲဒါကြောင့် ကျနော်ပိုစ့်တွေတင်နိုင်မှာ မဟုတ်သလို ဘလော့မောင်နှမတွေဆီကိုလည်း လာလည် နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် အခြေအနေအရ လာလည်လို့ရခဲ့ရင် လာပါ့မယ် အဓိက ကတော့ ကိုအင်တာနက်ကြီးပေါ့။ ကျနော်ပြန်လာမှ ခရီးသွားတဲ့အကြောင်းတွေကို တင်တော့မယ်။ ကျနော် အိမ်မှာမရှိပေမယ့် လာလည်ကြပါနော်။ အမှာတော်တွေ လည်းပါးခဲ့ကြပါ။ကော့မန်းတွေလည်းပွတ်သွားကြပေါ့။ဘလော့ကာမောင်နှမတွေ အားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေ . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 6:06 AM 1 ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
လှပနေတယ် ချစ်သူ . . .
အရာရာ ကဗျာဆန်နေလေရဲ့ . . .
အခု . . . ကိုယ်
ရွှေတွေစုနေတယ် . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 7:51 PM2ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
အချစ်ဆိုတာဘာလဲတဲ့ ကိုအောင်မျိုးဟန်က မေးပြီး tag သွားတယ်။ အချစ်ဆိုတာအချစ်ပေါ့ ဟဲဟဲ အပျော်ပါ အချစ်ဆိုတာ လူသားတိုင်းနဲ့ မကင်းတဲ့ စိတ်ခံစားမှု တစ်ခုလို့ ကျနော်မြင်ပါတယ်။ ဘယ်အရာမဆို အကောင်းနဲ့ အဆိုး ဆိုပြီးရှိတယ် အချစ်မှာလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။
မိဘတွေကို ချစ်တဲ့အချစ်၊ ဆွေမျိုး၊ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ ချစ်သူရည်းစား၊ သက်မဲ့ပစ္စည်းတွေ၊ တိရစ္ဆာန်လေးတွေ တော်ပြီးဆက်ရေးနေရင် ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးလေကကြီးမှာ လူတိုင်းတစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ ချစ်နေကြတာပဲလေ။ အဲဒီခံစားမှုနဲ့ပဲ ကဗျာတွေရေး၊ သီချင်းတွေစပ်၊ ၀ထ္တုတို/ရှည်၊ ဆောင်းပါး အဟာ အများကြီးပဲလေ။ အဲဒီအထဲမှာမှ ချစ်သူရည်းစားကို ချစ်တဲ့အချစ်က နာမည်အကြီးဆုံးပဲ။
ပေးဆပ်အချစ်၊ ရယူပိုင်ဆိုင်တဲ့အချစ်၊ အပျော်ချစ်၊ တကယ်ချစ်၊ မချစ်တချစ်၊ မထင်ကြီးလို့ချစ်၊ သနားချစ် ဒါတွေလည်းအများကြီး ဒီလိုပဲလေ လောကကြီးမှာ လူတစ်ကိုယ် စိတ်တစ်မျိုးစီပဲ မဟုတ်လား။ အချစ်ကို ခံယူထားချင်း ဘယ်တူပါ့မလဲနော်။
နောက်တစ်ခု အချစ်ဆိုတာလည်း အတ္တတစ်ခုပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့ ဥပမာဗျာ တစ်ယောက်ယောက်ကို ချစ်မိသွားပြီးဆိုပါတော့ သူလေးနဲ့တွေ့ချင်တယ် အချစ်စကားလေးတွေ ပြောချင်တယ် အဲလို လုပ်ချင်တာတွေ အများကြီးပေါ့ သူ့ကိုမတွေ့ရရင် မပျော်ဘူး ခွဲနေရရင်လွမ်းတယ်ပေါ့ မင်းမရှိရင် ကိုဘယ်လိုနေရလဲ ကိုမနေတတ်ဘူး စတာတွေပေါ့ အဲဒီခံစားမှုတွေက ဘယ်သူ့အတွက် ခံစားနေတာလဲ။ အသေအချာ စဉ်းစားကြည့်တော့ ကိုယ့်အတ္တအတွက်ပဲလေ။ သူ့ကိုမတွေ့ရရင် မပျော်ဘူး တွေ့ရရင်ပျော်မယ်ပေါ့ဗျာ။ တစ်ကယ်တော့ ကိုယ်ပျော်ရွှင်ဖို့ သူ့ကိုတွေ့ချင်တာရော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။
အချစ်ဆိုတာ ရိုးရိုးလေးပါ။ အချစ်ကြောင့် ပျော်ရွှင်တာရှိသလို ၀မ်နည်းတာလည်းရှိမှာပါ။ အချစ်ကြောင့် ဘ၀တိုးတက်အောင်မြင်နိုင်သလို ဘ၀လည်းပျက်သွားနိုင်ပါတယ်။ အချစ်ကြောင့် ပျော်ရွှင်နေရတဲ့လူတွေက အချစ်ကောင်းကြောင်းတွေပြောပြီး အချစ်ကြောင့် ၀မ်းနည်းနေတဲ့လူတွေတော့ အချစ်ရဲ့မကောင်းကြောင်းကို ပြောကြပါလိမ့်မယ်။
အချစ်အကြောင်းလေး . . . ရေးရင်းနဲ့ အချစ်ကြောင့် လူတိုင်း ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ
ဆက် tag လိုက်အုံးမှ . . .
ဂျေဂျေ ရေးပေးကြနော် အချစ်အကြောင်းလေ ။
ရေးသားသူ မော်စီ at 8:13 PM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ယုံတမ်းစကား . . .
ကျနော် ညတုန်းက တော်တော်နဲ့အိပ်မပျော်ဘူး ဒါနဲ့အိပ်ပျော်အောင် စာဖတ်မယ် ဆိုပြီး စာဖတ်ပါလေရော ဖတ်တဲ့စာအုပ်က ဟာသဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်အိပ်ပျော်မှာလဲ။ ဒါနဲ့ပဲမထူးပါဘူးဆိုပြီး ဒီအတိုင်းပဲအိပ် လိုက်တာ ဘယ်အချိန်အိပ်ပျော်သွား လဲမသိပါဘူး။
မိုးကလည်း သဲသဲမဲမဲကိုရွာလို့ဗျာ လမ်းကလည်းဗွက်တွေနဲ့ဆိုတော့ ချော်တာပေါ့ ဗွက်အိုင်နားမှာ ချော်ကျတာဗျာ ဖုန်ပါထသွားတယ်။ မထူးသောပါဘူး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ထူပြီးထရတာပေါ့။ အဲဒါနဲ့ လမ်းလျှောက်ရင်း ရွာထိပ်ကိုရောက်တော့ မကျည်းပင် တစ်ပင်တွေ့တယ် အားပါးပါး မကျည်းသီးတွေကလည်းအများကြီးပဲဗျို့။ မကျည်းပင်က အတော်လေးမြင့်တယ် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အပင်ပေါ်တက်ပြီး မကျည်း သီးခူးရမှပဲဆိုပြီး တက်တော့အပင်ပေါ်ရောက်တာပေါ့။
မကျည်းသီးတွေကလည်းများ လွန်းတော့ ဘယ်ဟာကိုခူးရမှန်းတောင်မသိဘူး။ မကျည်းသီးတွေကို အားပါးတရခူးပြီး ပြန်ဆင်းမယ်လုပ်တော့ အား ဒါမှဒုက္ခပဲ ပြန်မဆင်းတတ်တော့ဘူး ခုန်ချရမှာလဲအမြင့်ကြီးပဲလေ ဆင်းတာမတော်လို့ ခြေချော်ပြီး ပြုတ်ကျသွားရင် ခါးကျိုး ဒါမှမဟုတ် ခြေကျိုးလက်ကျိုးဖြစ်မှာပဲ။ဘယ်လို လုပ်ရင်ကောင်းမလဲ စဉ်းစားတော့ အကြံတစ်ခု ရတယ် လှေခါးနဲ့ဆင်းမယ်ပေါ့။ အဲဒါနဲ့ ရွာထဲကိုဝင်ပြီး အကြီးလှတို့အိမ်မှာ လှေခါးသွားဌားတာရလာလို့ပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် ဆင်းလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။
အစောကြီးရှိသေးတယ် အိမ်မပြန်သေးဘူး အဲဒီနားကချောင်းမှာ ငါးထိုင်မျှားလိုက် သေးတယ် အတော်လေးကြာတော့ ငါးတစ်ကောင်မိတယ်ဗျို့ ကျနော်ငါးမျှားတံကို ဆွဲတာ ဘယ်လိုမှမနိုင်ဘူး ငါးကတော်တော်ကြီးပုံရတယ်။ မထူးတော့ပါဘူး ကျနော်တစ်ခါတည်း ရေထဲခုန်ချလိုက်တယ် အားပါးပါး နည်းတဲ့ငါးကြီးမဟုတ်ဘူး တော်တော်လေးကိုကြီးတယ်ဗျာ ဘယ်အရွယ်လောက်ရှိမလဲဆိုရင် TITANIC ကားထဲ ပန်ကာကြီးလောက်ရှိတယ်။ ကျနော်တစ်ယောက်တည်း သယ်မနိုင်တာနဲ့ ရေအောက်မှာပဲ မီးမွှေးပြီးကင်စားလိုက်တယ် ငါးကကြီးတော့သုံးလလောက်စား လိုက်ရတယ်။
ဘာလဲမယုံဘူးလား တစ်ကယ်ပြောတာ မယုံလည်းနေပေါ့ မယုံရင်သူတို့တွေကို သွားမေးကြည့်လိုက် ပြောပြကြလိမ့်မယ် ပြောပြမယ်မဟုတ်လား . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 5:51 AM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကျနော်တို့လူသားတွေမှာ စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်တဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်း၊ ၀မ်းနည်းခြင်း၊ အားနာမှု၊ ကြောက်ခြင်း၊ ရှက်ခြင်း တော်ပြီးတော်ပြီး ဆက်ရေးနေရင် ကျနော်ရေးချင်တဲ့ အကြောင်းရေးရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ ဒီလိုဗျ ကျနော့်ကို ကိုကောင်းကင်ကိုက ကြောက်တတ်တဲ့သတ္တ၀ါများကြောင်း ရေးဖို့ tag ထားလေရဲ့။ အဲဒီတော့ ကျနော်ကြောက်တတ်တဲ့ သတ္တ၀ါကြောင်းကို ရေးတော့မယ်ဗျာ . . .
ကိုကောင်းကိုက ကြွက်ကိုကြောက်တယ်တဲ့။ ကျနော်ကတော့ ကြွက်ကိုမကြောက် ပေါင်။ သူနဲ့ကျနော်က ပြောင်းပြန်ဗျ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျနော်က မြွေကို ကြောက်တာကိုး။ ကျနော်က မြွေဆိုဘာမြွေဖြစ်ဖြစ်ကြောက်တယ်ဗျ။ အဆိပ်ရှိတာရော မရှိတာရော ရေမြွေရော ကြက်ဥခိုးတဲ့မြွေရော။ ကျနော်မြွေကို ဘယ်လောက်အထိကြောက်လဲဆိုတာကို ဆက်ပြောပြမယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖတ်ပြီး နားထောင်မယ်မဟုတ်လား။
မြွေကိုဘယ်လောက်ကြောက်လဲဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ရင်း သူတို့ကမြွေအကြောင်း တွေပြောနေရင် ကျနော်ခြေထောက်ကို အသာလေးခုံပေါ်တင်လိုက်တယ် ခဏနေ မြွေခုံအောက် ရောက်နေရင် ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲနော်။ ဒီနားမှာ မြွေတစ်ကောင်တွေ့တယ်ဆိုရင် မော်စီတို့ကတော့ သူများတွေလို ဒုတ်ကိုင်ပြီး လိုက်ရှာမှာမဟုတ်ဘူး အဲအနားကနေ ဟိုအဝေးကို ပြေးပြီးသာမှတ်။ မြွေတွေ့လို့ ``မော်စီရေ လုပ်ပါအုံး ဒီမှာမြွေတစ်ကောင်ဆိုရင်´´ ပြောတဲ့လူရဲ့ အမှားပဲ မော်စီတို့ကတော့ မြွေရှိတဲ့အနားမှာကို မနေတော့ဘူး။
ကျနော်တို့အိမ်မှာဆို ခြံထဲမှာမြွေတွေ့လို့ဆိုရင် အမေကလက်မြန်တယ် သူပဲရှေ့ဆုံးကလိုက်ရှာတယ်။ ကျနော့်အကိုဆို မြွေတွေ့ပြီးဆိုရင် မတွေ့တွေ့အောင် လိုက်ရှာတယ်။ မော်စီတို့နဲ့ကွာပါ့ ။ ဒီလိုပါပဲ ကျနော်တို့လူတွေ အားလုံးက ယောက်တစ်မျိုးစီ ကြောက်ကြတာပါပဲလေ။ မကြောက်တဲ့လူလဲ ရှိချင် ရှိမှာပေါ့။ အဲဒီတော့ ကျနော့် blogger မောင်နှမတွေထဲက သူတို့တွေကို ဆက် tag လိုက်မယ် ရေးပေးနော် . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 8:23 PM 1 ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ဟိုးရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကတာည်းက ကိုယ့်ထီး ကိုယ့်နန်း၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု တွေနေလာကြတာ သမိုင်းက သက်သေတည်ပါတယ်။ ရွှေဟသာင်္ဆိုတာ ကျနော်တို့ မွန်လူမျိုးတွေရဲ့ အထိမ်းအမှတ် အမှတ် အသား တစ်ခုပါ။ ရွှေဟသာင်္ကိုမြင်တာနဲ့ မွန်လူမျိုးကို အထူးပြုထားမှန်း သိသာပါတယ်။ မွန်နိုင်ငံ တည်ရှိရာ ဒေသကို ရာမညဒေသ ဟုလည်းခေါ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
ဟံသာဝတီ မွန်နိုင်ငံတော်ကြီး ကျဆုံးပြီးကတည်းက ကျနော်တို့ မွန်လူမျိုးတွေထီးမဲ့ နန်းမဲ့ ဖြစ်ခဲ့ကြတာ အခုချိန်ထိပေါ့။ ကိုယ့်ပစ္စည်းကို ကိုယ်ပြန်လိုချင်တာ သဘာဝကျပါတယ်။ သူများပိုင်ပစ္စည်းကို အတင်းလုယူတာမှ မဟုတ်တာ။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကိုပဲ ကိုယ်သုံးချင်တာ နည်းလမ်းကျပါတယ်။ ကိုယ့်
စကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု စတဲ့ အရာတွေကိုပဲ အသုံးပြုချင်တာပါ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းကို သုံးခွင့်မရတာ ဘာကြောင့်လဲ။ ကျနော်တို့မှာကိုယ်ပိုင် စကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု စတဲ့အရာတွေ ရှိနေပါလျက်နဲ့ ဘာဖြစ်လို့ အသုံးပြုခွင့် မရတာလဲ။ တွေးကြည့်ရင် ရင်နာစရာတွေပါ။
ရာမညမြေမှာ ရွှေဟသာင်္တွေ နားမှာပေါ့ ဘာဖြစ်လို့ ဆွမ်းအုပ်က နေရာဝင်ယူရတာလဲ ကိုယ့်မြေမှာ ကိုယ့်စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု အသင်းအဖွဲ့တွေရှိမှာပေါ့ ဘာဖြစ်လို့ ပိတ်ပင်တာလဲ တားဆီးရလဲဗျာ။ ရာမညမြေမှာ ရွှေင်္ဟသာမှ မရှိရင်မွန် စကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေမှမရှိရင် ရာမညမြေက ဘာအဓိပ္ပါယ်ရှိတော့မှာလဲ။
ရွှေင်္ဟသာ ရာမညမြေဆီ ပျံသန်းနိုင်ဖို့ သမိုင်းကပေးတဲ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရမှာ ကျနော်တို့ မွန်လူမျိုး တွေရဲ့ ကြီးလေးတဲ့တာဝန်တစ်ရပ်ပါ။ မွန်လူမျိုးတိုင်းဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက် ဘယ်အခြေအနေပဲရှိရှိ တတ်စွမ်းသလောက်ထမ်းဆောင်သင့်တယ်လို့ ကျနော်ထင်မြင်မိပါတယ်။
ရေးသားသူ မော်စီ at 7:50 PM 1 ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ဆူးခဲ့ ပြီးပေါ့ . . .
အရူးအမူးပေါ့ဗျာ . . .
ရောက်သွားလေမလား . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 12:10 AM 1 ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ဆုံဆည်းရာ blog မှ
ရေးသားသူ မော်စီ at 12:16 AM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ထိုင်း- မြန်မာနယ်စပ်တစ်နေရာမှ ယနေ့ ညနေ ခြောက်နာရီခွဲခန့်တွင်မွန်လူငယ် များစုပေါင်းကာ သံဃာနှင့် ပြည်သူများ သွေးစွန်းသောနေ့ အထိမ်းအမှတ်ဖြင့် ဘုရားတွင် မေတ္တာသုတ်များရွတ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်သံများ အော်ဟစ် ကြပါသည်။
ရေးသားသူ မော်စီ at 5:53 AM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
LET'S WEAR RED SHIRT
ရေးသားသူ မော်စီ at 7:51 PM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
တစ်ကယ်ပါ ကျနော့်ဘ၀မှာ တစ်ခါမှမကြုံဖူးတဲ့အဖြစ်တွေပါ။ဘယ်ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်မှ ခွင့်မလွှတ်တဲ့ အဖြစ်တွေပါ။ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှ မဟုတ်ပါဘူး ဘယ်ဘာသာ ၀င်မှ ခွင့်မလွှတ်ကြပါဘူး။ သံဃာတွေဟာ ဘုရားရဲ့သားတော်တွေပါ။
သံဃာတွေကို ဒုတ်နဲ့ရိုက် သာသနာ့အလံတွေကို ခြေထောက်နဲ့နင်း ဒါတွေဟာ
တစ်ကယ်မလုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေပါ။ စဉ်းစားကြည့်ကြပါ လူသူအများအပြား
လက်စုံမိုးပြီး ကန်တော့်နေကြတဲ့ သံဃာကိုဘာစိတ်ဓါတ်နဲ့ကိုယ်ထိလက်ရောက်
တစ်ကယ့်ကိုငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ ကိုယ့်ဆန္ဒကို ဖော်ထုတ်နေကြတာပါ။ ငြိမ်းချမ်း
စွာ တုံ့ပြန်သင့်ပါတယ်။ မရမ်းကားကြပါနဲ့ မရက်စက်ကြပါနဲ့ သံဃာတော်နဲ့ပြည်
သူတွေဟာ တစ်ကယ်အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေပါ။ ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးပါဝင်နေတာကို
ဘာတွေနဲ့ဖုံးကွယ်ကြမလဲ ဆင်သေကို ဆိတ်သားရေနဲ့ ဖုံးလို့မရပါဘူး။
သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့်ပါ တစ်စုံတစ်ယောက်၏ သွေးထိုးမှုကြောင့် ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးဆန္ဒပြပွဲမှာ ပါဝင်နေရတာဆိုရင် အဲတစ်စုံတစ်ယောက်ဟာ
တော်တော်လေးကို စွမ်တဲ့လူလို့ သတ်မှတ်ရမှာပေါ့။ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ
ကိုယ့်ဘ၀ကောင်းစားဖို့အတွက် ပြည်သူတွေ သွေးချောင်းစီးနေတာ ကြည့်ရက် ကြလားဗျာ။ အဲဒီလိုလုပ်မှ ထမင်းစားရမယ်ဆို အသေခံလိုက်တာ ပိုပြီးမြတ် ပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းဖြေရှင်းကြပါ အမှန်တရားကို မဖုံးကွယ်ကြပါနဲ့ ပြည်သူ တွေမှာ စဉ်းစားတတ်တဲ့ ဦးနှောက်ရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့ကြပါနဲ့။
ရေးသားသူ မော်စီ at 2:15 AM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကျနော် blog ကိုရေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ရယ်စရာတွေ ဗဟုသုတတွေကို
မျှဝေဖို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့လို့ပါ။ ဆန္ဒပြပွဲမှာ ပြည်
သူတွေ သေချေနိုင်မှန်း ကြိုသိထားပေမယ့် တစ်ကယ်တမ်းဖြစ်တော့ ဘယ်လိုမှ
ရေးသားသူ မော်စီ at 2:11 AM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကျနော်ကြားဖူးသော ဟာသများ (၂)
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက ဒေါသဖြင့် ပြောနေသည်။
``ဘယ်လိုလဲ တပ်မတော် စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး၊ ဘုန်းကြီးတွေ ဆန္ဒပြတာ မရပ်သေးပါလား။
မင်းပြောတော့ လွယ်လွယ်လေးဆို၊ ခေါင်းဆောင်တွေ ရွေးဖမ်းလိုက်ရင် ငြိမ်သွားမယ်ဆို။´´
``ဟုတ်ကဲ့၊ ထောက်လှမ်းရေး အစီရင်ခံစာတွေမှာ ခေါင်းဆောင်တွေ တိတိကျကျမသိရဘူးလို့ တင်ပြလာလို့ပါ ဗိုလ်ချုပ်၊ ကျနော် နည်းပေါင်းစုံနဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖော်ထုတ်ခိုင်းထားပါတယ်။´´
ထိုစဉ် ရုံးခန်းတွင်းသို့ ဗိုလ်မှူးကြီးတဦး ရေးကြီးသုတ်ပျာ ၀င်လာသည်။
``ဗိုလ်ချုပ်. .ဗိုလ်ချုပ် ကျနော် သံဃာတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဘယ်သူလဲဆိုတာ သိပြီး။ ဟောဒီစာအုပ်ထဲမှာပါတယ်။´´
ဟုတ်လား ဘယ်သူလဲ အမြန်ပြောစမ်း။´´
`` ``ဂေါတမ´´ တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်။´´
``အေး . . အဲဒါဆို သူ့ကိုဖမ်းလိုက်။
ကိုထိုက် ဘလော့မှ ကူးယူဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ (http://ko-htike.blogspot.com)
ရေးသားသူ မော်စီ at 9:28 PM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
စစ်အစိုးရက ဘန်းထားတဲ့ ၀က်ဘ်ဆိုက်၊ ဘလော့ဂ်တွေကို ဤနေရာမှတဆင့် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
(http://mmedwatch.blogspot.com) မှ ဆက်လက် လက်ဆင့်ကမ်းပါသည်။
ရေးသားသူ မော်စီ at 9:23 PM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
မျှဝေခံစားဖို့ . . .
ဗော်တိုင်းယား ရဲ့ကဗျာတစ်ပိုဒ်ပါ။ ဒီကဗျာကိုဖတ်ပြီး ကျနော်နားလည်ထား
တာက ကျနော်တို့လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ အနာဂတ်ကို လတ်တလောအခြေ
အနေကိုလေ့လာရုံနဲ့ ဘာဖြစ်ရမယ်လို့ အသေဟောကိန်းထုတ်လို့မရနိုင်ပါဘူး
ဥပမာ ကျနော်က ဒီအချိန်မှာပျက်စီးလေလွှင့်နေပေမယ့်နောင်တစ်ချိန်မှာ
အချိန် နဲ့ ကြမ္မာ အလှည့်အပြောင်း လူကောင်းတစ်ယောက် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ။ လောကကြီးမှာ အပြောင်းအလဲတွေရှိကြပါတယ်။ အပြောင်းအလဲ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အချိန်ဘယ်လောက်ကြာတယ်လို့ ထင်လဲ။
ကျနော့်အထင် သုံးစက္ကန့်ထက်ပိုမကြာဘူးဗျ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဥပမာဗျာ
ကျနော်က ဆေးလိပ်သောက်တတ်တယ် ဆေးလိပ်သောက်တာ မကောင်းတာ
သိတော့ ဆေးလိပ်ဖြတ်မယ် ဟုတ်ပြီး ကျနော်ဆေးလိပ်ဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်
ချက်ကိုချတာ အလွန်ဆုံးကြာ သုံးစက္ကန့်ပေါ့ဗျာ ဒါပေမယ့် ဆေးလိပ်ဖြတ်မယ် ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထိန်သိမ်းရတဲ့ အချိန်ကသာကြာတာပါ။ အပြောင်းအလဲ
တွေကို ထိန်သိမ်းဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်လိုလဲဆိုရင် လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ဆီ
မှာရှိတဲ့ ရင့်ကျက်မှုမှာ မူတည်တယ်လို့ ကျနော်မြင်တယ်။ ဒီလိုပါပဲ လောကကြီး
မထင်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်နော် . . . ။
ရေးသားသူ မော်စီ at 9:04 PM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ရှေ့ကိုက် (၁၀၀) တွင်ရန်သူရှိသည်
ဒီနေရာမှာ ငါးအကောင်ကြီးတွေရှိတယ်လို့ သတင်းရထားတယ်
ရေးသားသူ မော်စီ at 9:11 PM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ပြောခဲ့ဖူးပါရဲ့ . . .
သောက်ခဲ့ဖူးပါရဲ့ . . .
ချော့ခဲ့ဖူးပါရဲ့ . . .
နှုတ်ဆက်ခဲ့ဖူးပါရဲ့ . . .
ကျနော် လွမ်းခဲ့ဖူးပါရဲ့ . . .
စမ်းချောင်းကရေတွေ တော်တော်လေးစီးဆင်းသွားပြီလေ . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 1:24 AM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကျနော်ရယ်စရာလေးတစ်ခု ရေးမလို့ပါ။ ကျနော်ကြားဖူးတဲ့ ဟာသတွေထဲက တချို့
တွေကိုပေါ့။ ကျနော် ရယ်စရာတွေကို ရေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ကျနော် blog ကို
လာပြီး ပြုံးပျော်သွားစေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးနဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့် အခု ကျနော် မရေးချင်
တော့ဘူးဗျာ သူငယ်ချင်းတို့ ကိုကို မမ တို့ ဆက်မဖတ်ကြနဲ့တော့နော်။ ဆက်မဖတ်
ဘူး မှုတ်လား မဖတ်ပါနဲ့တော့ ကျနော်ဘာမှမရေးထားဘူး ဖတ်နေရင် အလကား
အချိန်ကုန်တာပဲ အဖက်တင်မယ် ဆက်မဖတ်နဲ့တော့ အော် မဖတ်ပါနဲ့ဆိုမှ ဖတ်နေ
ပြန်ပြီး ကဲကြည့် ပြောနေရင်းနဲ့ ဖတ်နေတာ တစ်ဝက်ကျော်သွားပြီး ကျနော်
အတန်တန်တားတယ်နော် ဆက်မဖတ်ပါနဲ့တော့လို့ ခဏနေ စာကဆုံးတော့မယ်
တော်တော်ပြောရခက်တယ် မဖတ်ပါနဲ့ဆို ဇွတ်ဖတ်တယ် တားမရလဲ ဖတ်ဗျာ . . .
ဟဲ ဟဲ အပျော်ပါ . . .မဖတ်ပါနဲ့ဆိုမှ . . .ဟင့်
ရေးသားသူ မော်စီ at 8:05 AM2ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကျနော်ကြားဖူးသော ဟာသများ (၁)
``ပျော်ပျော်နေ သေခဲ´´ ဆိုတဲ့ စကားပုံရှိပါတယ်။ မြို့ကိုမရောက်ဖူးတဲ့တောသား တစ်ယောက်က မြို့ကိုရောက်သွားလို့ ပျော်တယ်ဆိုပြီး ကားလမ်းမကို ကပြီးဖြတ်
တာ ကားတိုက်လို့သေရှာရော . . .။ ``တစ်ဆုပ်ကျဲရင် တစ်လှည်းဝင်´´ဆိုတဲ့
စကားပုံတစ်ခုရှိသေးတယ်။ တစ်ကယ်ပါ ကျနော် ရွာမှာနေတုန်းက တစ်ဆုပ်ကျဲရင် တစ်လှည်းဝင်တယ် ဆိုပြီး ဆန်တစ်ဆုပ်ကို ကျဲလိုက်တာ တစ်ကယ်ပဲ တစ်လှည်းဝင်
ပါတယ် ကျနော့်တို့ ခြံကို လှည်းဝင်တိုက်လို့ ခြံစည်းရိုးတစ်ခုလုံး ပျက်သွားတယ်။
ကျနော်ကြားဖူးတဲ့ ဟာသလေးတစ်ခုပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ စစ်လေယဉ်မောင်းဖို့
လေယဉ်မှူးတစ်ယောက်လိုတယ်ဆိုပြီးလျှောက်လွှာဝေပါတယ်။ သာမန်လေယဉ်မှူး အများစုက လျှေက်လွှာတင်ကြပါတယ်။ လျှေက်လွှာတင်တဲ့လူ အများကြီးထဲမှာ လျှေက်လွှာဖြည့်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီး သုံးယောက်ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်။သုံးယောက်ကို အင်တာဗျူးမေးပြီး တစ်ယောက်ကို ရွေးရမှာကို။ အဲသုံးယောက်ကပြည်နယ် တစ်ခုစီမှ ၀ါရှင်တန်မြို့ကို အင်တာဗျူးဝင်ဖို့ လာရောက်ကြပါတယ်။
ကဲ အင်တာဗျူး စပြီးမို့ ပြည်နယ်(၁)မှ လူက အင်တာဗျူးဖို့ဝင်သွားပါတယ်။ လေတပ်က လေယဉ်မှူးချုပ်ကမေးပါတယ်။
လေယဉ်မှူးချုပ် ။ ။ မင်းလေယဉ်ပျံမောင်းဖူးလား
ပြည်နယ်(၁)မှလူ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ မောင်းဖူးပါတယ်
လေယဉ်မှူးချုပ် ။ ။ ဘယ်လို လေယဉ်မျိုးကို မောင်းဖူးတာလဲ
ပြည်နယ်(၁)မှလူ။ ။ လေယဉ်မျိုးစုံကို မောင်းဖူးပါတယ်
လေယဉ်မှူးချုပ် ။ ။ ဟုတ်ပြီး မင်းကို အလုပ်ခန့်မယ်ဆိုရင် မင်းလစာ ဘယ်လောက်ယူမလဲ
ပြည်နယ်(၁)မှလူ။ ။ ကျနော် ဒေါ်လာ သုံးထောင်လောက်လိုချင်ပါတယ်။
ပြည်နယ်(၂)မှ လူရဲ့အလှည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပြည်နယ်(၂)မှ လူက အင်တာဗျူး
ခန်းထဲကိုဝင်သွားပါတယ်။ လေယဉ်မှူးချုပ်က ပြည်နယ်(၁)ကလူကို မေးသလိုပဲ
ပြည်နယ်(၂)မှလူ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ မောင်းဖူးပါတယ်
ပြည်နယ်(၂)မှလူ။ ။ ခရီးတင်လေယဉ်မျိုးကိုမောင်းဖူးပါတယ်
ပြည်နယ်(၂)မှလူ။ ။ကျနော် ဒေါ်လာ ခြောက်ထောင်လောက်လိုချင်ပါတယ်
လေယဉ်မှူးချုပ် ။ ။မင်းဘာဖြစ်လို့ ဒေါ်လာခြောက်ထောင်လိုချင်ရတာလဲ
ပြည်နယ်(၂)မှလူ။ ။ သုံးထောင်ကို ကျနော့်မိသားစုကို ထောက်ပံ့ပြီးကျန်တာကို
ပြည်နယ်(၃)ကလူရဲ့အလှည့်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုလည်းအထက်က မေးသလိုပဲ လေယဉ်မှူးချူပ်က မေးပါတယ်။
ပြည်နယ်(၃)မှလူ။ ။ ဘာလေယဉ်ပျံမှ မမောင်းဖူးဘူး
လေယဉ်မှူးချုပ် ။ ။ မင်းမှာ လေယဉ်ပျံပက်သက်ပြီး ဘာအတွေ့အကြုံရှိလဲ
ပြည်နယ်(၃)မှလူ။ ။ ဘာတွေ့အကြုံမှ မရှိဘူး
လေယဉ်မှူးချုပ် ။ ။ ဒါနဲ့ မင်းကို အလုပ်ခန့်မယ်ဆိုရင် မင်းလစာ ဘယ်လောက်ယူမလဲ
ပြည်နယ်(၃)မှလူ။ ။ကျနော် ဒေါ်လာကိုးထောင်လောက်လိုချင်ပါတယ်
လေယဉ်မှူးချုပ် ။ ။ ဘာအတွက် ဒေါ်လာကိုးထောင်လိုချင်ရတာလဲ
ပြည်နယ်(၃)မှလူ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ဒေါ်လာသုံးထောင်ကို ပြည်နယ်(၁)ကလူကိုငှားဖို့ နောက်ဒေါ်လာ သုံးထောင်ကိုကျနော့်မိသားစုကိုထောက်ပံ့မယ်
ကျန်တဲ့သုံးထောင်ကိုတော့ ကျနော့်ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာအတွက်သုံးဖို့ပါ။
ကဲဘယ်သူ့ကို အလုပ်ခန့်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားပြီးဖြေပေးကြပါဗျာ
ရေးသားသူ မော်စီ at 10:08 PM3ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကျနော် Internet မှာ လျှောက်မွှေရင်း နည်းနည်းထူးတာ တွေ့လို့တင်လိုက်တာပါ . . .။
ရေးသားသူ မော်စီ at 7:06 AM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ဖိနပ်ကြောင်းမပြောခင် ကျနော့်ကိုကျနော် အရင်မိတ်ဆက်ပါရစေ။ အဲဒီတုန်းက
၀ယ်လိုက်တယ်။ ဖိနပ်က ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ဈေးလည်းသိပ်မပေးရဘူး
ဘာလေး သွားရအောင်ဆိုပြီး အဲစိတ်ကူးနဲ့ ၀ယ်လိုက်တာပါ။ မနက် (၇း၁၅)
လောက် ကားဂိတ်ရောက်သွားတယ်။ ကျောင်းကားကို မတွေ့တာနဲ့သူငယ်ချင်း
တစ်ယောက်ကိုမေးလိုက်တယ် . . .
ဟော ဟိုမှာမေတ္တာရှင်ဆိုတဲ့ ကျောင်းကားကြီးလာပါပြီး။ ကျောင်းကားစီးပြီး ဖိနပ်
အသစ်လေးနဲ့ ကျနော်ကျောင်းကိုသွားပါတယ်။ ကျောင်းရောက်တော့ မိုးကရွာ
ပါတယ် ထီးဆောင်းပြီး ကျောင်းဝင်းထဲကို လမ်းလျှောက်ဝင်သွားပါတယ်
လမ်းတစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့ ကဲ ပြဿနာက အဲဒီမှာစတာ . . . . . . .။
ကျနော့်ဖိနပ်အသစ်ကလေးပြတ်သွားပါပြီး။ အဲဒါနဲ့ (EP) workshop အဆောင်
နားမှာရပ်ပြီး မိုးခိုရင်း လူသွားလူလာရှင်းအောင်စောင့်ရတာပေါ့။ ဒါမှပြတ်သွားတဲ့
ဖိနပ်ကို ယာယီပြင်ပြီး ဖိနပ်အသစ်သွားဝယ်ရမှာလေ။
ကျနော်တို့(EP)မှ သရုပ်ပြဆရာက . . .
``ဟေ့ကောင် မင်းဘာရပ်လုပ်နေလဲ လာလေ မင်းအတန်းမတက်ဘူးလား´´
``ဟဲဟဲ တက်မယ်ဆရာ ကျနော် ဟိုဟာ . . .´´
``ဒီကောင် အူကြောင်ကြောင်နဲ့ မြန်မြန်လာ´´
လာပြန်ပါပြီးနောက်တစ်ယောက် (EP) Btest က အစ်မတွေက . . .
``ဟဲ့ နင်ဒီမှာဘာလုပ်နေလဲ အတန်းမတက်ဘူးလား´´
``ဘာလဲ ထီးမပါလို့လား လာငါနဲ့လိုက်ခဲ့လေ´´
``ရတယ်အစ်မ ကျနော် ဟို ဟို ဖိနပ်´´
``အော် ဘာမှမဖြစ်ဘူး ကျနော် ဟို . . .´´
``အေး ဘာမှမဖြစ်လဲ ပြီးရော ငါသွားပြီး´´
ပြင်လိုက်ပါတယ်။ ဖိနပ်ဝယ်မယ် သွားဖို့ တစ်ခုစဉ်းစားမိလိုက်တယ် အခုလကုန်
ခါနီးရက်ဆိုတော့ ကျနော် ဘိုင်ပြတ်နေတဲ့ရက်တွေပဲ အဲဒီတော့ သူငယ်ချင်း
တစ်ယောက်ဆီမှာ ပိုက်ဆံချီးဖို့ အတန်းဘက်ကို ပြန်သွားပါတယ်။
ကျနော် ပိုက်ဆံချီးနေကျ ထမင်းကပ်စားနေကျသူငယ်ချင်းတစ်ဆီသွားတယ်။သူ
နဲ့ကျနော်က မေဂျာ ခြင်းမတူဘူး။ အဲဒါနဲ့ သူအတန်းဘက်ရောက်တော့ . . .
``ဟဲ့ နင်ဘာလာလုပ်တာလဲ အတန်းမတက်ဘူးလား´´
``ဟင့်ဟင်း ဆရာမ မလာဘူး´´
``နင်ပိုက်ဆံပါတယ် မဟုတ်လား ငါ့ကိုချီးစမ်းဟာ ငါ့ဖိနပ်ပြတ်သွားလို့
နင်အားတယ် မဟုတ်လား လာ နင်ပါလိုက်ခဲ့´´
ဆိုပြီး သူ့ကိုပါ ကျနော် ချောဆွဲလိုက်တာ။ သူက ကျနော့် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ
စိတ်အကောင်းဆုံးနဲ့ ကျနော် အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပါ။ ကျနော်တို့
နှစ်ယောက် ဖိနပ်ဆိုင်ရောက်တော့ သူ့ပိုက်ဆံနဲ့ ဖိနပ်တစ်ရံဝယ်လိုက်တယ်။
ပြတ်သွားတဲ့ ဖိနပ်ကိုတော့ အမှိုက်ပုံမှာ ထာဝရ အနားယူခိုင်းလိုက်ပါတယ်။
ကျနော် နည်းနည်းထပ်ပြောချင်ပါတယ် . . .
ဖိနပ်ဆိုတာ ကျနော်တို့လူတွေမှာ အနိမ့်ဆုံးနေရာက ရုပ်ဝထ္ထုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ကဲကြည့် ဖိနပ်ပြတ်လို့ ကျနော် ဘယ်လောက်အလုပ်ရှုပ်သွားလဲ။ ကျနော်တို့
လူတွေမှာ ရွှေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဆွဲကြိုးတို့ လက်စွပ်တို့ မပါပဲသွားလာလို့အဆင်
ပြေနိုင်ပေမယ့် ဖိနပ်မပါပဲ သွားလာလို့ အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ရွှေနှင့်ဖိနပ်ကိုယှဉ်
ကြည့်မယ်ဆိုရင် တန်းဖိုးချင်း ပမာဏ ကွာခြားလွန်းပါတယ်။ ကျနော် ကြားဖူးတာ
တစ်ခုက အုန်းပင်တက်တဲ့နေရာမှာ တက္ကသိုလ်က ပါမောက္ခဟာ ပညာမဲ့ တဲ့
အုန်းပင်တက်တဲ့နေရာမှာအုန်းပင်တက်သမားက ပညာရှိပေါ့။ ဘယ်သူမဆို
ဘယ်အရာဝထ္ထုမဆို သူ့နေရာနဲ့သူ၊ သူ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့သူ၊ သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူ ရှိကြပါတယ်။
(ကျနော့်ရဲ့အမြင်ကို တင်ပြခြင်းပါ ဝေဖန်ပေးကြပါ)
ရေးသားသူ မော်စီ at 10:36 PM2ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကြွေသွားတာပဲလေ . . . .
ရေးသားသူ မော်စီ at 1:49 AM 1 ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကျနော် ငယ်ငယ်တုန်းက ခလေးပေါ့ ဟဲ ဟဲ အပျော်ပါ ကျနော် ပြောချင်တာက
ကျနော်တို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ယောင်ပေစူးလေးတွေနဲ့ကွယ် ပုဆိုးကို
စလွယ်ကာရွာဝိုင်းပတ်လည် ရောသီချင်းနဲ့ရောသွားတယ် ဒီတခါတစ်ကယ်
ပြောပြီး ကျနော် ငယ်ငယ်တုန်းက မွန်ပြည်နယ်လမိုင်းမြို့နယ်က
ကော့ဒွတ်ရွာမှာ နေတာပါ။ အဲဒီနောက် ကျနော် ၃တန်းရောက်တော့
ကျနော့် ဦးဝယ်ထားတဲ့ ပြည်မြို့ကအိမ်မှာ သွားနေရတယ်။ ကျနော့်
ပြည်မြို့ကအိမ်ကိုဝယ်ဖြစ်သွားတာပါ။ အဲဒီတော့ ကျနော့်ဦး
နှင့်အတူ ပြည်မှာသွားနေတာပေါ့။ အဲဒီတုန်းကကျနော်ဗမာစကားကိုကော
င်းကောင်းမတတ် သေးဘူး။ ပြည်မှာ အမှတ်(၁)ကျောင်းနှင့်တွဲဖက်
ပန်းပဲတန်းမူလတန်းကျောင်းမှာ ကျောင်းနေရတယ်။ ကျနော်
ကျောင်းစတက်တဲ့နေ့မှာ ကျနော်အကိုက ကျောင်းကိုလိုက်ပို့ပေးတယ်။
အတန်းထဲရောက်တော့ အတန်းထဲက ကောင်လေး၊ကောင်မလေးတွေက ကျနော်ကို
မွန်လူမျိုးဆိုပြီး ထူးထူးဆန်းဆန်းဝိုင်းကြည့်ကြတာ ကျနော်မှာ
ဟဟ ဘာဖြစ်တာလဲ တစ်ခုခုပြန်ပြောဖို့လည်းဗမာစကားကို ကောင်းကောင်းမတတ်တော့ အခက်တွေ့နေတာပေါ့။ ခဏတော့ ဆရာမက အတန်းဝင်လာမှ သူတို့က နေရာပြန်ထိုင်ကြတာ ကျောင်းစတက်တဲ့နေ့က အမှတ်တရလေးပါ။ မိုးတွင်းရောက်တော့ ကျနော်တို့နေတဲ့
ရပ်ကွက်က ရေမြုပ်တော့ သွားလာရတာအခက်အခဲ ဖြစ်တာပေါ့။ ကျနော့်အမက
ဈေးတစ်ခါသွားရင် တစ်ပတ်စာနှစ်ပတ်စာ ၀ယ်လာရောအဲဒီမှာပဲ ဆိတ်သားကို
နှစ်ပတ်လောက် စားလိုက်ရတာ ဒီနေ့အထိ ဆိတ်သားကို ကျနော် မုန်းသွားတာ။
ကျောင်းက ကျနော်တို့အိမ်နဲ့ နည်းနည်းလေးဝေးတယ် စက်ဘီးနဲ့သွားကြတာ။
နေတာကြာတော့လည်း ဗမာစကားကို လည်လည်ဝယ်ဝယ်တတ်လာပါတယ် သူငယ်ချင်းတွေလည်း
အများကြီးရလာတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက ကျနော့်ရဲ့နာမည်ကို မခေါ်ပဲ မွန်လေး
မွန်လေးနဲ့ ဆရာမတွေကအစခေါ်ကြတာ။ ကျောင်းထဲမှာ တစ်ဦးတည်းသော မွန်ဆိုတော့
လူသိများတာပေါ့။ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေမှာကျနော်တို့ ရွှေဆံတော်ဘုရားကို
သွားဖူးလေ့ရှိပါတယ်။ ရွှေဆံတော်ဘုရားမှာ ထူးခြားချက်တစ်ခု
ရှိတယ်။ အဲဒါက ရွှေဆံတော်ဘုရားမှာ ထီးတော်နှစ်ခု ရှိတယ်ဆိုတာပါ။
ထီးတော်ငယ်နှင့် ထီးတော်ကြီး ဆိုပြီး ထီးတော်ငယ်ကိုမွန်လူမျိုးတို့တင်ထားပြီး ထီးတော်ကြီးကို ဗမာတွေနောက်ထပ်တင်ထားတာပါ။ များသောအားဖြင့် ကျနော်တို့သုံးယောက်ပဲ အိမ်မှာနေရတာပါ။ ကျနော့်ဦးက သူအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ အနေများတယ်။ အဒေါ်က
အဖွားကိုပြုစုဖို့ ရွာမှာကျန်ခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့မောင်နှမသုံးယောက်ကို ဆွေမျိုးရင်းခြာတွေလို ပြုစုစောင့်ရှောက်ခဲ့တဲ့ ကျနော့်အမရဲ့အတန်းပိုင် ဆရာမရဲ့ကျေးဇူးကို ဒီနေ့အထိ အောက်မေ့နေလျက်ပါ။ ကျနော် ပြည်ကို စရောက်တဲ့နှစ်မှာ န၀ဒေးတံတား တိုင် ၄ တိုင်ထူထားပြီးဖြစ်တယ်။ ကျနော် ပြည်မြို့ကို စွန့်ခွာခဲ့တဲ့နှစ်မှာပဲန၀ဒေးတံတား ဖွင့်ပွဲပြုလုပ်ပါတယ်။ ကျနော် ပြည်မြို့ကိုစွန့်ခွာခဲ့ ၁၅ နှစ်ကျော်ရှိပါပြီး။ ကျနော် လျှောက်
ခဲ့ဖူးတဲ့ တာဘောင်ရိုးမှာ ကျနော်ရဲ့ခြေရာတွေ ကျန်ရစ်နေအုံးမယ်လို့
ရေးသားသူ မော်စီ at 11:45 PM2ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ကြိုက်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် ကြိုက်လို့တော့မရဘူး
သူတို့က မိန်းကလေးစစ်စစ်မဟုတ်ပါ ဖြတ်ဖောက်ချုပ်တဲ့ဗျာ။
လုံးဝမထင်ရဘူး မသိလို့ကြိုက်မိရင်တော့ ဒုက္ခ။
ရေးသားသူ မော်စီ at 10:15 PM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်
ဒါက ဘန်ကောက်မှာကျင်းပတဲ့ မယ်ပြိုင်ပွဲပါ
မယ်တော့မယ်ပဲ ဒါပေမယ့် အခြောက်မယ်ဖြစ်နေတယ်
ရေးသားသူ မော်စီ at 10:06 PM0ယောက်ကဒီလိုမြင်ပါတယ်